Flip nke Digital Remedy na-eme ịzụrụ, ijikwa, mee ka ọ dị mma, na ịlele mgbasa ozi n'elu (OTT) dị mfe | Martech Zone
Flip Digital Remedy na-eme ịzụrụ, ijikwa, mee ka ọ dị mma, na ịlele mgbasa ozi n'elu (OTT) dị mfe.
Wenezde, August 25, 2021 Wenezde, August 25, 2021 David Zapletal
Mgbawa ahụ na nhọrọ mgbasa ozi na -enuba, ọdịnaya, na nlele n'ime afọ gara aga emeela N'elu-Top (OTT) mgbasa ozi agaghị ekwe omume ileghara anya maka ụdị na ụlọ ọrụ na -anọchite anya ha.
Kedu ihe bụ OTT?
OTT na-ezo aka na ọrụ mgbasa ozi na-enuba nke na-enye ọdịnaya mgbasa ozi ọdịnala ozugbo ma ọ bụ na-achọ na ịntanetị. Usoro ahụ n’elu-n’elu na -egosi na onye na -eweta ọdịnaya na -agafe ọrụ ịntanetị ndị a na -ahụkarị dị ka ịgagharị weebụ, email, wdg.
Mbipụ ụdọ nke bidoro ike tupu oria ojoo a agbasaala n'ike n'ike site na ime atụmatụ Nde nde 6.6 na -egbutu eriri afọ gara aga, na-eme ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ezinụlọ ndị America enweghị eriri. Ọzọ A na -atụ anya na 27% ga -eme otu ihe ahụ na 2021.
Site na nkwanye ugwu ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ikiri TV, nnukwu ndị na -ege ntị na -adọta ọtụtụ nlebara anya n'aka ndị mgbasa ozi. A na -atụ anya imefu ego na mgbasa ozi OTT site na $ 990 nde na 2020 ruo ijeri $ 2.37 ka ọ na -erule 2025, na -eji nwayọ na -aga n'ihu na -erute ebe kachasị elu TV maka mmefu.
N'agbanyeghị nnukwu ohere, imezu mgbasa ozi OTT nwere ike bụrụ ihe ịma aka maka nnukwu na obere ụdị na ụlọ ọrụ. N'inwe ọtụtụ nyiwe, ọ na -esiri ike ịmata nke ị ga -ahọrọ. Ijikwa mmekọrịta gị na ọtụtụ ndị nkwusa na -esiri ike ma ọ nwere ike isi ike soro usoro ziri ezi iji mara ihe na -arụ ọrụ na ihe na -adịghị.
Iji dozie ihe ịma aka ahụ, Flip, arụmọrụ OTT ikpo okwu sitere na Digital Remedy, na -enye ụzọ dị nkọ iji zụta, jikwaa ma kwalite mkpọsa OTT. Mana gafere ọnụego mmecha vidiyo, ikpo okwu mmeri Digiday a na-enye ụdị nkọwa zuru oke n'ime ihe okike kacha arụ ọrụ, mpaghara ala, ndị na-ebipụta akwụkwọ, ndị otu ụbọchị, na ndị ọzọ. Ọ na-ewepụta njikwa zuru oke, mbuli akara, yana nyocha mbuli elu iji mee ka ndị mgbasa ozi mara ọ bụghị naanị nke mkpọsa na-ebute nsonaazụ (yana otu), mana na-etinye nghọta ndị a ka ha rụọ ọrụ ozugbo, na-eme ka mkpọsa dị na ozugbo gaa na mgbanwe dị elu. Ngwọta ọrụ zuru oke na-ejikwa ndụ mgbasa ozi OTT niile, na-enyere ụdị na ụlọ ọrụ nha niile aka iji ohere OTT mee ihe n'ụzọ dị mfe.
Isi mmalite sitere na Ndepụta Ngwa
Site na mmekorita ụlọ ọrụ sara mbara, ụdị na ụlọ ọrụ na -enweta nnweta ozugbo na onye nkwusa OTT ọ bụla kachasị elu iji bulie iru ndị na -ege ntị. Igwe okwu Flip na-enye data bara ụba karịa iji kwalite njikarịcha oge, na-agba mbọ hụ na mkpọsa na-eme ike ha niile ka ha na-enye nghọta miri emi ma na-eme ihe kachasị na mmefu ego nke onye mgbasa ozi. Maka enweghị onye etiti, ụdị na -enweta ọnụahịa kachasị arụ ọrụ nke ọma, na -ekepụta ROI dị elu ma laghachi na mmefu mgbasa ozi (ROAS). Ma n'ihi na a na -ejikwa atụmatụ OTT niile n'ime Flip, ọ dịghị mkpa inwe ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ nkwekọrịta ndị na -ere ahịa. Ọ dị mfe, gbakọtara, ma rụọ ọrụ nke ọma.
Tụọ ihe, ọ bụghị naanị nlele
Ka nha OTT na -aga n'ihu na -etozu, ụdị chọrọ ileba anya karịa ọnụego mmecha vidiyo (ọnụọgụ abụọ ee/mba), pịa na mmetụta. Na njedebe nke ụbọchị, ndị mgbasa ozi chọrọ ịma ka mkpọsa ha na -esi arụpụta ihe atụ, n'ikpeazụ, ahịa. Flip nwere ike jikọọ ntụpọ ndị ahụ, tụọ KPI dị ka nbudata ngwa, nleta webụsaịtị, ụgbọ ala ịzụ ahịa malitere, yana nleta ụlọ ahịa. Ikpokoro nwere echiche na nsonaazụ mgbasa ozi n'ezie, ka ị nwee ike ịhụ ihe na -arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ.
Nke a bụ otu njiri mara nke na -eme ka azịza anyị bụrụ ihe pụrụ iche n'ezie - anyị nwere ike kegide nsonaazụ ya na mgbasa ozi wee mee ya na ngwaọrụ ọ bụla, yabụ ị nwere ike ịhụ ihe na -akpali agịga. Nke ahụ pụtara na ị ga-enweta ezi echiche, nke nwere ike ime ihe iji mee mgbanwe bara uru na mkpọsa gị iji nweta ebumnuche azụmahịa gị n'okpuru.
Michael Seiman, onye isi nchịkwa dijitalụ
Data sara mbara maka nghọta miri emi
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere ike nweta data ndị ahịa nke mbụ ha na ọ bụ ya-ọ nweghị ihe gbasara ndị ahịa ndị asọmpi gị ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike. Site na Flip, ị nwere ike weta data nke gị wee jikọta ya na ọtụtụ Remedy Digital Remedy isi mmalite data ma tinye data a sara mbara maka ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na ịkọwapụta nke ọma. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ị nweta data nke ndị asọmpi gị iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Nsonaazụ ebuli Brand ozugbo
Na agabeghị nlegharị anya na ntụgharị obere mmiri, Flip na-enyekwa ohere ka ndị na-ere ahịa soro akara ngosi site na ijikọta metrik njikọ aka na nghọta dabere na nyocha iji tụọ mmata, ncheta na nghọta. Yabụ maka ndị na -agbanwegabeghị, Flip na -enye gị ohere inyocha obi gị ka ị hụ ma mgbasa ozi gị na ndị na -ege gị ntị lekwasịrị anya.
Chọpụta ihe na -akpali agịga n'ezie
Na mgbasa ozi dijitalụ, enwere ọtụtụ mgbanwe ndị enwere ike ịpụta na ọganiihu mkpọsa. Eziokwu bụ, ndị na -ege ntị nwere ike, ma yikarịrị ka a ga -ekpughere mgbasa ozi gị na ọwa mgbasa ozi ndị ọzọ n'otu oge n'oge mgbasa ozi OTT gị. Ọ gaghị adị mma ịkọwapụta akụkụ nke mkpọsa gị na -ebute nsonaazụ n'ezie? Site na Flip, ụdị nwere ike ịza ajụjụ a: nke onye ọ bụla mere ihe, mmadụ ole n'ime ha mere otu ahụ n'ihi mkpughe OTT kpọmkwem? Flip na-enye mmụba mmụba na-abawanye, na-atụ ma na-achọpụta mgbanwe nke mkpọsa gị nwere mmetụta kachasị na akara ala gị n'okporo ụzọ ndị ahịa ịzụta. Ọ na -enye ọkwa nke ịkpa oke site na ikewapụta nsonaazụ yana ịtọpụta uru nke OTT n'ime mkpọsa gị niile. Site n'ịtụle ọnụego mgbanwe nke ndị ekpughere na ndị na -achịkwa gafee mgbanwe dị ka ihe okike, ndị mbipụta akwụkwọ, na ndị na -ege ntị, anyị na -enwe ike ịhụ ka mmadụ nwere ike ịgbanwe mgbe ekpughere ya na mgbasa ozi gị na OTT ma ọ bụ dabere na mgbanwe mgbanwe ụfọdụ.
Ọtụtụ iri nke ọkachamara n'akụkụ gị
Igwe ahụ nwere amamihe dị ka ụmụ mmadụ nọ n'azụ ya, ndị otu nọ na Digital Remedy nọ na -arụ ọrụ na vidiyo na OTT kemgbe tupu ị nwee ike soro ihe ọ bụla. N'ime ihe karịrị afọ 20 n'ime oghere dijitalụ, ha na -emezu n'ofe ụdị mgbasa ozi niile, kemgbe azụ mgbe ị ka kwesịrị iji aka gị kwalite. N'iji ihe dị ka afọ ise na oghere OTT n'onwe ya, ihe ọmụma ụlọ ọrụ a pụtara na ị ga-enweta teknụzụ na-akwado data nke nwere nka miri emi sitere n'aka ndị ọkachamara nọ n'akụkụ nke ọzọ dị ka ndị na-ere ahịa n'onwe ha ma nwee nghọta miri emi banyere igwe metrik ndị mgbasa ozi chọrọ n'ezie. iji hụ. Nrụpụta ọrụ, nleba anya, na mkpesa ka arụpụtara site n'echiche ndị ahịa iji nye nghọta ị chọrọ iji ghọta nke ọma ọrụ mkpọsa.
Ịbanye na usoro ọhụrụ dị ka OTT nwere ike iyi ihe siri ike, ọkachasị na nrụgide agbakwunyere ịmara na ị nweghị nhọrọ ọ bụla - ọ bụ ebe ndị na -ege gị ntị na ndị asọmpi gị na -aga. Mana site na ezigbo ngwa na nka dị n'akụkụ gị, ọbụlagodi ụdị na ụlọ ọrụ pere mpe nwere ike ịsọ mpi na nnukwu ụmụ nwoke na ọwa ọhụrụ a na -ekpo ọkụ. Site na ikpo okwu arụmọrụ Flip OTT, Digital Remedy na -eme ka ọ nweta, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala maka ụdị na ndị na -ere ahịa na ọkwa niile iji merie na OTT.
Hazie ngosi ngosi nke ihe mgbapụta dijitalụ
Tags: mgbasa oziọgwụgwọ dijitalụtụgharịaottott mgbasa ozinjikwa mgbasa ozi ottmgbasa ozi ottmgbasa ozi ottnyocha ottnjikwa mgbasa ozi ottnjikarịcha mgbasa ozi ottott mkpọsan’elu-n’elu
Afọ 15 afọ Digital Remedy, Zapletal rụrụ ọrụ na nso nso a dị ka Chief Innovation & Media Officer ruo ihe karịrị otu afọ mgbe ọ sonyeere ụlọ ọrụ ahụ dị ka EVP nke Media Ịzụ na Mgbasa Ozi. N'ime ọrụ ọ kacha ọhụrụ, nka na mmetụta Zapletal dị mkpa maka mmepe nke ntọala ala Usoro ọgwụgwọ dijitalụ Ngwọta AdReady+ na Flip, ọ bụghị naanị na-eduga ndị otu na-ekesa ma kesaa ya kamakwa na-eweta ahụmịhe ya na arụmọrụ mgbasa ozi na tebụl, yana nghọta miri emi banyere mkpa ndị ahịa na isi ihe mgbu.
Ụdị Ahịa Digital & Amụma
Nudgify: Mụba Mgbanwe nke ụlọ ahịa gị site na nyiwe ihe akaebe nke mmekọrịta a jikọtara ọnụ